ZDENİZ Ferry Ferry Fleet oo wata Baabuurta | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYTurkish Aegean35 IzmirZDENİZ Gawaarida Gawaarida leh oo wata Gawaarida Gawaarida
22 / 01 / 2020 35 Izmir, Turkish Aegean, SAWIRADA, GUUD, WADADA, Headline, TURKEY
Diyaaradaha Ferry ayaa ku fiday safarka badda Izmir
Dawlada Hoose ee Magaalada Izmir waxay balaarinaysaa duulimaadyada hada jira iyada oo la eegayo ujeedada hadafka hagaajinta gaadiidka badda. Markabkii ugu horreeyay ee gawaarida loo adeegsado sanadkan ayaa laga bilaabay Tuzla iyadoo xaflad loo qabtay.
Dawlada Hoose ee Magaalada Izmir, oo hadafkeedu yahay inay kordhiso saamiga gaadiidka badda ee safarka magaalooyinka, ayaa bilaabeysa labo gaari oo nooca cusub ah sanadkaan. Biyihii ugu horreeyay ee alwaaxyo laga dhisayo Tuzla, Istanbul, ayaa la bilaabay shalay.
Qalabka markabka cusub oo wata 322 rakaab ah, 51 gaari, 18 baaskiil iyo 10 mootooyin, ayaa lagu dhameystiri doonaa badda waxaana loo dirayaa İzmir. Doomaha cusub ee gawaarida ayaa dhex mari doona inta u dhaxeysa 'yukuyular Bostanlı' ee Izmir bisha May. Markabka, oo xawaareyn kara ilaa 22 kiiloomitir (12 garaam) saacaddii, ayaa la filayaa inuu la kulmo Izmir Bay bisha Nofembar.
Sideed markab ayaa la qaadi doonaa saddex sano gudahood
Isaga oo ka hadlaya furitaanka doonida gawaarida, Xoghayaha Guud ee Dowlada Hoose ee Magaalada Izmir Dr. Buğra Gökçe wuxuu tilmaamay in habka dawlada hoose ee gaadiidka ay ku dhisantahay horumarinta nidaamka tareenka, kordhinta gaadiidka dadweynaha iyo yareynta qiiqa kaarboonka. Wadooyinka tareenka ah ee aan dhisnay oo aan isku daynay in aan sameyno iyada oo aan la helin taageerada dowladda ayaa sidoo kale tilmaame u ah go'aankeena ah in aan gaarno saddexdaa hig. Waxaa saaran 16 markab oo rakaab ah iyo seddex gaari oo kuwa xamuulka ah oo saaran maraakiibteena badda. Buğra Gökçe ayaa u mahadceliyay cid kasta oo gacan ka geysatay dhismaha markabka.
Xoghayaha guud ee dowlada hoose ee magaalada Izmir Buğra Gökçe, kuxigeenka xog hayaha guud Eser Atak, madaxa waaxda gaadiidka Mert Yaygel, masuuliyiinta maraakiibta Çelik iyo xafiisyada laxiriira ee laxiriira ayaa kasoo qeybgalay xaflada lagu qabtay markabka Çeliktrans ee Tuzla.
Kuwa reer Yariisiya ayaa magacaabi doonta markabka
Markabka, oo magaciisa lagu go’aamin doono su’aal-weydiin ay dadka reer Izmir ka qeybqaadan doonaan, ayaa la bilaabay ka dib markii ay jeexjeexeen sacabkii ay sacab ku fureen shaqaalihii iyo Antİrm Anthem. Qorshaynta in lagu daro lix markab oo dheeri ah maraakiibteeda Sanadaha 2021 iyo 2022, Magaalada Izmir ee Magaalo Weyn ayaa ku dartay sideed maraakiib cusub oo lagu soo daro maraakiibteeda sanadka 2023, oo ay la socdaan laba doonyood oo la doonayo in la howl galiyo sanadkan.
Sifooyinka farsamada ee doonta doomaha
Ballac: 15,2 m
Dhererka: 74 m
Miisaan: 1323 tan
Awoodda: 2 x 1000 faras
Xawaaraha: 12 garaam
Doomaha jira ee İZDENİZ
2. Sagaal Sebtember
Soodhka Eurasia ee Imaatinka Marmaray
Ogeysiiska Qandaraaska: Gawaarida Gaadiidka iyo Gawaarida Korontada ee Wareegtada ayaa la Gadanayaa
Dekedda TCDD leh soo-jeedinta baabuurta
Sifeynta Birta ee Birta
Adeegga doomaha ee İzmir
Gaadiidka badda ee gobolka İzmir ee magaalada
Adeegyada doonta fzmir
Khadadka Ferry oo wata baabuurta Izmir Bay